Ihe ị ga-eme mgbe ị wụnye Linux Mint 18 "Sarah" | Site na Linux
Luigys toro | | Nkesa, GNU / Linux, Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ
Taa m wụnye Linux Mint 18 "Sarah" na Cinnamon Desktop Environment, nke na-akpa ileba anya, na-akpa àgwà nke ọma na enweghị nsogbu na ngwaike m, maka ndị chọrọ ịnwale distro a, m na-ahapụ nduzi nke Ihe ị ga-eme mgbe wụnye Linux Mint 18 "Sarah".
Ntuziaka dabere na ahụmịhe m na Linux Mint 17 (nke m jiri ogologo oge gara aga), na mgbakwunye na ntuziaka na ka anyi jiri Linux na Mint Linux kachasị 18 de Erik dubois (nke m si nweta ọtụtụ edemede ma hazie ha chọọ m).
Mgbe ịmechara ndu ahụ, desktọpụ gị nwere ike ịbụ otu a, na mgbakwunye na emelitere, kwụsie ike yana ezigbo sọftụwia dị mkpa, ihe niile a ngwa ngwa na nchekwa.
1 Fọdụ echiche iji banye na akaụntụ tupu ịmalite ntuziaka
2 Nzọụkwụ ị ga - ewe mgbe ị wụnye Linux Mint 18 "Sarah"
2.1 Gbaa ndị Mmelite Manager
2.2 Wụnye ndị ọkwọ ụgbọ ala (kaadị vidiyo, ikuku, wdg)
2.3 Wụnye mkpọ asụsụ
2.4 Wụnye njikwa batrị
2.5 Wụnye git
2.6 Hazie ọdịdị
2.6.1 Ederede iji wụnye isiokwu kachasị mma maka Linux Mint 18
2.6.2 Ederede iji wụnye akara ngosi kachasị mma maka Linux Mint 18
2.6.3 Selecthọrọ Okwu na Oyiyi
2.6.4 Ederede iji wụnye nhazi nke kachasị mma maka Linux Mint 18
2.7 Wụnye ihe mgbochi ederede
2.8 Wụnye mmemme dị mkpa na akpaghị aka
2.9 Wụnye ngwanrọ iji kpọọ
2.10 Wụnye ihe ntanetị na nha ụda
2.11 Wụnye mmemme ndị ọzọ
2.12 Gụọ akwụkwọ ndị gọọmentị
2.13 Nyochaa usoro ohuru anyị
Linux Mint 18 na-abịa na ọtụtụ mmepe, ọtụtụ usoro a rụrụ na ndu a (ma ọ bụrụ na ọ bụghị ha niile) dakọtara na desktọọpụ ọ bụla.
Nzọụkwụ ị ga - ewe mgbe ị wụnye Linux Mint 18 "Sarah"
Ọ dị mkpa iburu n'uche na a nwalere usoro nke ọ bụla na nyochara nsonaazụ ziri ezi ha, n'otu ụzọ ahụ, nke a bụ nke m site na nzọụkwụ, yabụ eleghị anya ụfọdụ ihe ịkwesighi ime dịka ị masịrị gị, ntuziaka a ga-azọpụta gị oge dị ukwuu na karịa ihe niile ọ ga - enyere gị aka ime ka distro gị kwụsie ike ma maa mma.
Gbaa ndị Mmelite Manager
Wụnye ndị ọkwọ ụgbọ ala (kaadị vidiyo, ikuku, wdg)
Wụnye mkpọ asụsụ
Wụnye njikwa batrị
Ọ bụrụ na ị wụnye Linux Mint 18 na laptọọpụ gị, ana m akwado ka ị wụnye njikwa batrị nke ga-enye gị ohere ijikwa ụgwọ na nchapu batrị gị maka ha, anyị ga-agbaso usoro ndị a:
Nhazi ndabara nke ngwa a na-ekwe nkwa iji batrị gị nke ọma, yabụ wụnye ya na ọ bụ ya.
Obi abụọ adịghị ya, nke a bụ usoro iwu, iji wụnye git na Linux Mint 18, anyị ga-ede iwu na-esonụ:
sudo apt-nweta wit-niile
Enwere ọtụtụ ụzọ iji hazie Linux Mint 18 gị, ọtụtụ n'ime ha bụ n'efu, enweghị m oge dị ukwuu iji wụnye ihe n'otu n'otu, gaa nyocha na ihe ndị ọzọ, yabụ ana m eji akwụkwọ edemede 3 nke ga-enyere anyị aka ịwụnye. isiokwu dị iche iche, akara ngosi na ntọala maka conky.
Accessnweta edemede iji budata ma wụnye isiokwu na akara ngosi kachasị mma, anyị ga-mmepụta oyiri repository nke nwere ma, na mgbakwunye na nke scripts iji wụnye isiokwu ọ bụla iche. Maka nke a, anyị ga-emerịrị iwu na-esonụ:
oji okike https://github.com/erikdubois/themes-icons-pack.git
Ederede iji wụnye isiokwu kachasị mma maka Linux Mint 18
Iji na-agba ọsọ ahụ akwukwọ niile-in-once-installation_deb_themes.sh, dị na nchekwa gburugburu-icons-pack.git na anyị na-cloned, anyị ga-si cloned ndekọ, igbu ndị na-esonụ akwukwọ n'ụzọ dị otú a:
Ederede a ga-arụnye ihe ndị a na-akpaghị aka gburugburu maka Linux Mint 18.
Ambiance Okwu na Radiance agba
Arch ntu oyi GTK
Arch Frost GTK Ọchịchịrị
Ceti 2 Isiokwu
Ebumnuche doro anya
Numix Daily isiokwu
Isiokwu Vertex (ọchịchịrị na ìhè)
Ederede iji wụnye akara ngosi kachasị mma maka Linux Mint 18
Dị ka anyị mere na gburugburu, iji wụnye akara ngosi anyị ga-chọta onwe anyị na ndekọ na gburugburu-icons-pack.git ma na-agba ọsọ na-esonụ akwukwọ dị ka nke a:
Ederede a ga-arụnye ihe ndị a na-akpaghị aka akara ngosi maka Linux Mint 18.
Sardi akara ngosi akara ngosi
Numix okirikiri akara ngosi
Ihe oyiyi Evopop
Superflat remix akara ngosi
Ihe oyiyi di iche iche di elu
Flatwoken akara ngosi
Moka na Faba
Ihe oyiyi Papirus
Papirus gbara ọchịchịrị Gtk
Selecthọrọ Okwu na Oyiyi
Ozugbo ị wụnye akara ngosi na isiokwu mkpọ, anyị na-aga n'ihu ịhọrọ nke kachasị mma, iji mee nke a site na menu anyị nwetara «Isiokwu», anyị na-ahọrọ Nchikota Window Window, Oyiyi, Njikwa, Mouse Pointer na Desktọpụ.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ka desktọpụ gị dị ka nke m, ị ga-ahọrọ nhazi ndị a:
Linux mint gburugburu 18
Ọ dị mma ịmara na ọ bụrụ na ịchọrọ iwepụ akara ngosi na isiokwu n'ọdịnihu, ị nwere ike ịme ya site na ịme edemede ndị a dị na nchekwa nchekwa:
Ederede iji wụnye nhazi nke kachasị mma maka Linux Mint 18
Conky, bu ihe nlere anya nke gosiputara ihe omuma banyere ihe di iche iche, dika ebe nchekwa RAM, ojiji CPU, oge sistemụ, wdg. Nnukwu uru bụ na e nwere ọtụtụ "skins" nke ngwa a.
Na nke a m na-eji Aura nchịkọta nke nhazi nke conky mara mma, nke anyị ga-enweta site na imechi ụlọ ọrụ gọọmentị:
Mepee folda ahụ ma mee edemede ndị a
Ederede a ga - ebudata usoro nhazi site na github ma mepụta folda .aura (folda zoro ezo). Kedu ebe enwere ike ịhọrọ nhazi ọhụụ ọ bụla, anyị na-aga na folda ekepụtara
N'otu oge na ndekọ a, anyị na-egbu:
nke ga-emelite conky na ụdị kachasị ọhụrụ. Ọ bụrụ na anyị abanye na ndekọ .aureola anyị ga-enwe ike ịlele folda dị iche iche nke kwekọrọ na nhazi conky dị iche iche, ịhọrọ nke anyị chọrọ, anyị na-abanye na folda kwekọrọ ma mee iwu ndị a: ./install-conky.sh nke ga - eme ntọala niile dị mkpa na akpaghị aka.
Nkọwa conky dị na halo dị ka ndị a:
Halo - Akara
Halo - Ọkụ
Wụnye ihe mgbochi ederede
Wụnye mmemme dị mkpa na akpaghị aka
Ihe ndị a maka m bụ mmemme dị oke mkpa nke m na-etinye mgbe niile, yabụ m weere edemede ahụ Erik dubois na m gbanwetụrụ ya na m mmasị, na ya na ị nwere ike iwunye ndị na-esonụ ngwa:
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ibudata ya na akpaghị aka, ị ga-emerịrị iwu na-esote (nke na-ebudata edemede ahụ na pasta anyị, na-enye ya ikike igbue ma mepụta edemede ahụ)
Wụnye ngwanrọ iji kpọọ
Maka m nke a abụghị ihe dị mkpa, mana maka ndị na-amasị egwuregwu, na mgbakwunye na nnukwu ọbá akwụkwọ nke egwuregwu na ebe nchekwa nwere, anyị nwekwara http://www.playdeb.net/welcome/, Peeji ọzọ puru iche na ichikota egwuru-egwu nke sistemụ Linux na nchịkọta .deb. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịnụ ụtọ egwuregwu Windows anyị, ịghara ịda mba, ebe anyị nwere ụfọdụ ụzọ ndị ọzọ:
2. Kpọtụrụ anyịhttp://www.playonlinux.com/en/) ihe omuma ozo nke n’enye anyi oba akwukwo nwere ike itinye ma jiri ngwanrọ emebere maka Windows
3. Asụsụ Lutris (http://lutris.net/) usoro ikpo okwu egwuregwu mepụtara maka GNU / Linux, nnukwu akụ n'agbanyeghị na ọ nọ na mmepe.
4. Mgbapu (http://wiki.winehq.org/winetricks) na-arụ ọrụ dị ka edemede nke na-enyere aka ibudata ọba akwụkwọ dị mkpa iji gbaa egwuregwu Linux, dị ka .NET Frameworks, DirectX, wdg.
Wụnye ihe ntanetị na nha ụda
Wụnye mmemme ndị ọzọ
1. Na Mmemme Mmemme, nke anyị na-abanye site na NchNhr> Nchịkwa, anyị nwere ọtụtụ mmesapụ aka nke mmemme maka ọrụ ọ bụla dakwasịrị anyị. A na-ahazi njikwa ahụ site na edemede, nke na-eme ka ọchụchọ maka ihe anyị chọrọ. Ozugbo mmemme anyị chọrọ dị, ọ bụ naanị okwu nke ịpị bọtịnụ awụnyere na ịpị paswọọdụ Nchịkwa; Ọbụna anyị nwere ike ịmepụta ahịrị nrụnye nke otu njikwa ahụ ga-eme n'usoro.
2. Na nchịkọta ngwugwu anyị maara nke ọma nchịkọta ndị anyị chọrọ ịwụnye. Agaghị atụ aro ka ịwụnye mmemme site na ncha ma ọ bụrụ na anyị amaghị nchịkọta niile anyị ga-achọ.
3. Site na ọnụ (NchNhr> Ngwa mma) na iji kọmputa ede na-emekarị sudo apt-get install + aha mmemme. Mgbe ụfọdụ, anyị ga-ebu ụzọ tinye nchekwa na iwu sudo apt-get ppa: + aha nchekwa; ịchọ a usoro na console anyị nwere ike pịnye apt search.
5. Si ukara peeji nke oru ngo ma ọ bụrụ na i nwere ihe ọ bụla ọzọ echichi nzọụkwụ.
Gụọ akwụkwọ ndị gọọmentị
Ọ dịkwa mma ịnwe sistemụ gị oge niile, bido nụ ụtọ nkesa kachasị amasị gị, sorokwa ụwa kerịta ihe ị mụtara.
N'ikpeazụ, anyị na-echere echiche gị banyere ntuziaka: Ihe ị ga-eme mgbe ị wụnye Linux Mint 18 "Sarah"
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » Ihe ị ga-eme mgbe ị wụnye Linux Mint 18 "Sarah"
Ihe 51 kwuru, hapụ nke gị
Buah, achoro m iwepu Ubuntu m ma tinye distro a. Ọ dị ezigbo mma.
Ekele na isiokwu ahụ, na nnọkọ ọnụ n'ozuzu. Ezigbo ọrụ
Ọ dabere na Ubuntu, maka ndị ọrụ ọhụụ (ma ọ bụ ndị ejiri windo) ọ bụ n'enweghị obi abụọ ọ bụla nhọrọ kachasị mma.
ma ọ bụ maka ndị dị ka m, bụ ndị nọ naanị na ụwa nke Linux kemgbe 2005 na m na-ahọrọ ya n'ihi na ọ bụ nke ahụ kachasị mụọ m.
Obi ọjọọ zuru oke maka pc desktọọpụ. Ezigbo ozi.
Na iwepu conky?
Ọ bụrụ na ị pụtara iwepụ nhazi, họrọ nke ọzọ, edemede ahụ na-ewepu otu na-akpaghị aka ma tinye nke ọhụrụ
Echere m na ọ bụrụ na ọ dị nfe dị ka ihichapụ folda ahụ, zoo ma ghara zoo, maọbụ ọ bụrụ na ị ga-eme ihe ọzọ
Edemede dị oke ma zuru ezu maka mint lint, ọ bụ ezie na n'oge a anaghị m eji ya, akara ngosi akara ngosi, mkpụrụ edemede, nhazi conky, wdg. Dị mma maka m iji nkesa Linux ndị ọzọ.
Ntuziaka dị ezigbo mma ma zuru ezu. Maka m Linuxmint bụ desktọọpụ kachasị amasị m, ntakịrị ihe karịrị otu ọnwa gara aga m wụnye Ubuntu Unity n'ihi nsogbu ndakọrịta ọkwọ ụgbọala na achọrọ m ịlaghachi na Mint Cinnamon.
Ma ọ bụ dijo
Total ekele maka isiokwu, M ugbua nwere iji wụnye gburugburu Oyiyi icho mma m Sarah .. XD
Zaghachi na OrMain
Enwere m ụdị a ma gbuo ya. Eziokwu bụ na ọ na-aga nke ọma, enwere m Ubuntu, mana ọ dị arọ nke ukwuu, nke a ka mma. Ọ bụ ezie na ọ bụ ezie, ọ na-achọpụta na enwere njikarịcha ka mma maka windo karịa maka Linux, iji hụ ma ndị na-emepụta ngwanrọ na-arụ ọrụ ntakịrị.
Daalụ maka nke a. Ezi ndu iji hazie.
M na-anwa ịwụnye isiokwu ahụ ma m nwetara nke a ./all-in-once-installation_deb_themes.sh
bash: ./all-in-once-installation_deb_themes.sh: Faịlụ ma ọ bụ ndekọ adịghị adị
Kedu ihe m nwere ike ịme?
Mgbe cloning git mmepụta oyiri repository https://github.com/erikdubois/themes-icons-pack.git
ị kwesịrị ị na cd gburugburu-icons-mkpọ na-n'ime ndekọ na n'ihendesịta na n'oge ahụ igbu ./all-in-once-installation_deb_themes.sh
Nwanne, kedụ ebe m ga-esi ahọrọ isiokwu m chọrọ?
Ana m anwa ibudata edemede iji wụnye mmemme, mana ọ na-enye m njehie: "chmod: Enweghị ike ịnweta 'install-all-soft.sh': Faịlụ ma ọ bụ ndekọ adịghị adị." O nwere ike inyere m aka ịhụ ebe nsogbu dị. Daalụ nke ukwuu.
Daalụ nke ukwuu. Ntuziaka bara uru.
Otu ajụjụ, ahụrụ m na ị nwere onye ahịa WhatsApp uld you nwere ike ịgwa anyị ihe ọ bụ?
M mepụtara ya n'onwe m na nkuzi a m mere tupu: https://blog.desdelinux.net/aplicaciones-de-escritorio-pagina-web/
Ndewo, daalụ maka nkuzi a, ọ bara nnukwu uru.
Otu ajụjụ, m hụrụ na ị nwere onye ahịa WhatsApp… ị nwere ike ịgwa anyị ihe ọ bụ?
Ndewo, ekele maka ozi ahụ; Enwere m ajụjụ ole na ole iji hụ ma ị nwere ike biko duzie m:
1.- Kedu ihe nhazi nke aghaghari ime ka conky na-agba onwe ya mgbe komputa na agbanye?
2.- Gini ka ikwado?
Ana m ekele gị nke ọma n'ọdịnihu, ekele!
1. Site na Linux Mint menu gaa aplicaciones al inicio, wee tinye ma mepụta otu na aha ya conky na iwu conky
2 Ọfọn, ọ bụ maka uto onye ọ bụla, ana m eji Aureole - Poku mana ọ pụtaghị na nke a bụ ihe kachasị mma
Ndewo, ị nwere ike ịgwa m ebe m nwere ike ibudata nzụlite ndị a ị na-ahụ na nkuzi ahụ ma ọ bụrụ na akara ngosi akara ngosi dakọtara maka Linux mint 17. Ekele m Daalụ
Na ịntanetị ị nwere ike ịnweta ọtụtụ ego, ndị nke nkuzi ahụ anọghị na nchekwa. Ha na-arụ ọrụ maka Linux Mint 17
Ndewo. Ọ bụ ezigbo ezigbo ndu, daalụ maka ịkekọrịta na nnukwu ọrụ gị.
Ana m agwa gị na m ruru akụkụ nke ibudata akara ngosi na isiokwu, mana na ngalaba «inghọrọ isiokwu na akara ngosi» ị na-egosi na ị ga-aga na -menu- ma họrọ -themes-, agbanyeghị, enweghị ụdị nhọrọ a na m sistemụ. Ajụjụ doro anya bụ, olee otu m ga esi esi wụnye mmemme a?
M anya n'ihi na ya na "Software Manager" na-na na -apt wụnye gburugburu- na ihe ọ bụla.
OS: Mint 18 sara
Kernel: x86_64 Linux 4.4.0-45-ọnụọgụ
Ọkpụkpụ: bash 4.3.42
GTK Isiokwu: Mint-X [GTK2]
Isiokwu Isiokwu: Mint-X
CPU: Intel isi i5 CPU M 520 @ 2.394GHz
GPU: Gallium 0.4 na llvmpipe (LLVM 3.8, 128-bit)
Daalụ maka enyemaka gị n'ọdịnihu.
Zaghachi Moises RO
Na nchịkọta nhọrọ site na mmasị ị nwere ike ịme Gburugburu, ọ bụrụ na nrụnye gị dị n'asụsụ Bekee ọ nwere ike ịbụ isiokwu
Iji wụnye akara ngosi, mezie
(Emehiere m ma amaghị ihe kpatara ya, lee ./haha)
Ọ bụrụ n'ezie na ị ga-emerịrị
Ndo, ana m enweta njehie "Faịlụ ma ọ bụ ndekọ ahụ adịghị adị" ọbụlagodi na mgbazi ị gosiri.
Ndewo, enwere m ekele maka ntuziaka ebe ọ bụ na ọ nyeere m ezigbo aka ịhazi LinuxMint m, naanị m nwere otu nsogbu
Mgbe m na-egwu vidio na mgbe m na-ebugharị windo, m na-enweta ụfọdụ ntanetị mara mma nke na-emebi ihe oyiyi ahụ ma ahụbeghị m ngwọta ya, ikekwe n'ihi na amaghị m aha nsogbu ahụ, ihe ngwọta ahụ apụtaghị. Enwere m olileanya na ị nwere ike inyere m aka.
anaghị arụ ọrụ maka m: wget http://paste.desdelinux.net/?dl=5254 && chmod + x wụnye-all-soft.sh && ./install-all-soft.sh wepụta nke a: wget http://paste.desdelinux.net/?dl=5254 && chmod + x wụnye-all-soft.sh && ./install-all-soft.sh
Idozi paste.desdelinux.net (paste.desdelinux.net)… 104.18.41.104, 104.18.40.104, 2400: cb00: 2048: 1 :: 6812: 2968,…
Ijikọ na paste.desdelinux.net (paste.desdelinux.net) | 104.18.41.104 |: 80… jikọọ.
Ezitere arịrịọ HTTP, na-eche nzaghachi… 200 OK
Ogologo: akọwapụtaghị [ederede / larịị]
Chekwaa: 'index.html? Dl = 5254.1'
index.html? dl = 5254. [<=>] 4.51K –.- KB / s na 0s
2016-11-15 21:38:27 (12.7 MB / s) - 'index.html? Dl = 5254.1' echekwara 
chmod: enweghị ike ịnweta 'install-all-soft.sh': Enweghị faịlụ ma ọ bụ ndekọ dị otú ahụ
Ndewo, abum onye ohuru ma enwere m ajuju ma odi ka imeputa obere menu nke inwere n'okpuru ebe ihe mmemme a na-ese n’elu mmiri putara. Achọrọ m ima otu esi eme ya xD,
Zaghachi na dark_code
Emezuru ya site na ịwụnye plank: sudo apt-get install plank
Amalitere m na ụwa linux ma wụnye distro a n'ihi na enwere m mmasị n'ile anya ya, gbakwunye na ntinye gị, ọ zuru oke maka m, ekele maka ihe niile.
N'ihi obere nsogbu na Ubuntu m, ekpebiri m ịnwale nkesa ndị ọzọ; Achọtara m Mint na o mere m "ojiplático." Ọ kwụsiri ike, kensinammuo (ọkachasị maka ndị anyị na-amalite ma agaghị anwa anwa jiri ọnụ) mezue ... m hụrụ ya n'anya.
Karị na m hụrụ obodo Linux n'anya, na-aza azịza maka nsogbu anyị mgbe niile.
Isiokwu a dị oke mma, enweghị m ọnwa na Linux Mint 18 ma taa, m ga - enweta ikike kachasị na ya… ọ dị mfe ịhazi…… Enwere m ike ịgbakwunye contribution nnukwu onyinye, Daalụ…
Zaghachi Ivan Martinez
Ndewo, ntuziaka dị ezigbo mma, mana ọ naghị enye m ka m jiri anya nke uche hụ ihe ahụ, na mgbe m wụnye isiokwu nke conky enwere m njehie ma m nweta nke a:
***** Imlib2 Onye Mmepụta ịdọ aka na ntị *****:
Mmemme a na - akpọ oku Imlib:
################### NJEDEBE #######################
Maazi Nkịtị dijo
Ezigbo ndu na-enweghị obi abụọ, achọrọ m ịkele gị maka oge na nraranye gị. Anọ m na-eche maka inye Xubuntu ohere ọzọ, mana mgbe m gụsịrị gị, echere m na m ga-anwale Sarah (onye na-atụkarị aro maka aha naanị 😉)
Ekwuru m site n'aka nwa mmefu nke laghachiri na Linux mgbe afọ ole na ole nke enweghị ọrụ.
Zaghachi Maazi Nkịtị
Morningtụtụ ọma nụ
Daalụ - Onyinye gị zuru oke
Achọrọ m imesi ike na agbasoro m usoro gị niile gbasara ntinye nke GIT, enyeghị m njehie ọ bụla, mana agbanyeghị na ha apụtaghị na ha eburu ibu, mgbe ha na-abanye mmasị - isiokwu.
M na-efu a nzọụkwụ iche site na ndị ị na-nkọwa
Abụ m newbie ka Linux
N'aka nke ọzọ, achọrọ m iji ohere nye gị ịnye m ndụmọdụ (gbaghara maka mmetọ ahụ) mana abụ m onye mmemme na m na-ejikwa sistemụ na Visual FoxPro maka windo. Nke bụ ihe kasị mma virtualizer efego windo na-anọgide na-enye nkwado ka m na usoro…. Ma obu uzo ozo adighi adighi nma ...
Daalụ maka nchịkọta gị…!
Zaghachi Gerardo Ramirez
Na-enyocha njikọta ... emeela.
Mmepụta oyiri na «/ tmp / papirus-icon-theme-kde» ...
Aha ojii maka 'https://github.com':
Paswọdu maka 'https://github.com':
dịpụrụ adịpụ: achọtaghị nchekwa.
onwu: Nyocha amaghi maka 'https://github.com/PapirusDevelopmentTeam/papirus-icon-theme-kde/'
chọta: "/ tmp / papirus-icon-theme-kde": Faịlụ ma ọ bụ ndekọ ahụ adịghị adị
cp: enweghị ike ịgụ na '/ tmp / papirus-icon-theme-kde / *': Faịlụ ma ọ bụ ndekọ adịghị adị
Mmepụta oyiri na «/ tmp / papirus-icon-theme-gtk» ...
Otu ihe ahụ na-eme m, amaghị m ihe m ga-abanye na aha njirimara na paswọọdụ github, kedu ka ị siri dozie ya?
tinye banye ma gaa n'ihu, ọ bụ ezie na echere m na ebudataghị ihe a na-akpọ papirus pack ..
Ndewo, post a nyeere m aka nke ukwuu.
Naanị m nwere nsogbu na nhazi Conky. Kpọmkwem na isiokwu gambodekuno, m na-agbaso usoro ndị a niile, mana mgbe m na-agba ọsọ ahụ, enwere m ike ịhụ na ihuenyo ahụ gbara ọchịchịrị ntakịrị, naanị m na-ahụ ederede ederede "Aureola Gamnodeku v1.7.7" na enweghị ihe ọ bụla.
Foto etinyere na njikọ: http://oi66.tinypic.com/acwdid.jpg
Enwetala m ya na mbụ, ihe niile na-arụkwa ọrụ nke ọma, mana m gbanyeghachiri sistemụ m. Kedu ihe adabaghị?
Enwere m olile anya na ị ga - enyere m aka idozi ya.
Zaghachi Felipe Zúñiga
wget http://paste.desdelinux.net/?dl=5254 && chmod + x wụnye-all-soft.sh && ./install-all-soft.sh
Idozi paste.desdelinux.net (paste.desdelinux.net)… 104.18.40.104, 104.18.41.104, 2400: cb00: 2048: 1 :: 6812: 2968,…
Ijikọ ya na paste.desdelinux.net (paste.desdelinux.net) [104.18.40.104]: 80… jikọtara.
E zigara arịrịọ HTTP, na-eche nzaghachi ... 200 OK
Dekọ ka: "index.html? Dl = 5254.2"
index.html? dl = 5254.2 [<=>] 4.51K –.- KB / s na 0.003s
2017-11-07 16:46:33 (1.39 MB / s) - "index.html? Dl = 5254.2" echekwara 
chmod: 'install-all-soft.sh' enweghị ike inweta: Faịlụ ma ọ bụ ndekọ adịghị
Zaghachi JOSE ALBERTO
Ndewo… .M nwere ike iwunye desktọọpụ na akara ngosi site na iwu mana mgbe ịnwa itinye ha n'ọrụ ọ naghị arụ ọrụ…
Ndewo, naanị m wụnye lint mint 18 ka m hụrụ na sistemụ arụmọrụ a na-achọsi ike n'ihe banyere win10, nke mbụ
Mbipụta dị m ezigbo mma, m ga-aga n'ihu na-enyocha ya mana enwere m obere nsogbu na nke ederede a, ka m kọwaa: ebe m na-ede iwu ahụ ị debere n'elu ./all-in-once-installation_deb_themes.sh
N'ikpeazụ? daalụ ekele
dị ezigbo mma na-adọrọ mmasị na ndu.
Enwere naanị otu nsogbu, mgbe m nwara ibudata edemede maka mmemme ndị dị mkpa, ọ na-agwa m ihe ndị a: wget: enweghị ike idozi adreesị nke onye nnabata ahụ "paste.fromlinux.net"
kedu ka m ga-esi gboo ya.
ma wụnye ihe ederede na Linux mint 19 ma ọ nweghị isiokwu kama ọdịdị, ọ naghị arụ ọrụ ma ọ bụ ka ị wụnye ngwaọrụ dịka gnome tweak tools ma ọ bụ yiri ya?
Enwere m mmasị na ndabere Aureola - Poku, ị nwere ike ịgwa m ihe isiokwu a bụ?
Gburugburu: Igwe nbanye nke mara mma na nke mara mma maka Linux Mint
Etu esi wụnye LAMP na akpaghị aka na CentOS / Debian / Ubuntu